Isinxibo esiqhelekileyo saseJalisco, uphawu lwesazisi saseMexico | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 12/05/2021 09:19 | isiko, Mekhsikho
Isinxibo esiqhelekileyo seJalisco sinokufana okuninzi kunye nesinxibo esiqhelekileyo imali, ukusa kwinqanaba lokuba badla ngokudideka. Ngapha koko, kukholelwa ukuba abokugqibela bazalelwa kwidolophu yaseJalisco ICocula. Nangona kunjalo, azifani ncam. Okwesibini kubo kubandakanya amaqhosha ebhlukhwe kunye nebhatyi, ukongeza ekubeni nemibala eyahlukeneyo.
Nangona kunjalo, isinxibo sokwenyani esiqhelekileyo saseJalisco, esiza kuhlala kweli nqaku, sisengqiqweni. Njengoko igama layo libonisa, siza kukuxelela malunga nezambatho zakudala zeli lizwe laseMexico, elikwintshona yelizwe kunye nemida yezo Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, ngokunjalo nakuLwandlekazi lwePasifiki.
1 Iimpawu ezizodwa zesinxibo esiqhelekileyo seJalisco
1.1 Imbali yesuti
1.2 IJalisco isinxibo esiqhelekileyo sabasetyhini
1.3 Isinxibo seJalisco emadodeni
2 Isetyenziswa nini ilokhwe eqhelekileyo kaJalisco
2.1 Usuku lweCharro
Iimpawu ezizodwa zesinxibo esiqhelekileyo seJalisco
Siza kuqala ngokwenza imbali encinci ngokubhekisele kule mpahla kwaye sijolise kwizambatho eziqhelekileyo zamadoda nabasetyhini. Zombini zahluke kakhulu, zininzi inemibala ngakumbi kwaye ichwayitile eyabafazi.
Imvelaphi ye charro isuti, ethi, njengoko sele ugqibile, yindabuko evela eJalisco, isusela emva kwinkulungwane ye-XNUMX. Okumangalisayo kukuba, impahla echaza iMexico phesheya yazalwa, ngokutsho oko kukholelwa, kumazwe aseSpain, ngokukodwa kwi Salamanca.
Njengoko uyazi, abemi beli phondo babizwa, ngokuchanekileyo, charros. Kwaye, ukuba ujonga iimpahla zabo eziqhelekileyo, kuyinyani ukuba bayafana nesinxibo saseJalisco. I-Spanish inebhlukhwe eyomeleleyo emnyama, ibhatyi emfutshane yombala ofanayo kunye neebhutsi eziphakamileyo. Umnqwazi uyafana, nangona unamaphiko amancinci kakhulu.
I-Charros enelokhwe eqhelekileyo kaJalisco
Le mpahla yayiya kudlulela eMelika ngokufika kwe-Hispanics kwaye iya kwamkelwa kwi Indawo yaseJalisco. Nangona kunjalo, ifumene iinguqulelo ezininzi. Kwiinkulungwane ezilandelayo, yaphuculwa ngokongezwa izinto ezininzi ezenziwe ngezandla kunye nezihombiso. Sele ikwi-XIX, yayiyeyona isetyenziswa yi chinacos, Igama elinikwa amadoda ayesebenza emasimini.
Njengomdla, siya kukuxelela ukuba umlawuli UMaximilian waseHabsburg Wayeyithanda kakhulu isuti ye-charro. Waye wayisebenzisa kaninzi ezama ukuziqhelanisa nohlanga lwakhe olutsha. Sele kuguqukile eMexico, le mpahla yaba yinto edumileyo Isinxibo seMexico esinqabileyoUkugqitha kuleyo ixhaphakileyo kweminye imimandla yelizwe (ukuba ufuna ukwazi okungaphaya malunga noku, siyakucebisa Oku kubhaliwe).
Nangona kunjalo, okwangoku ayizizo zonke iimpahla eziqhelekileyo ze-charro ezifanayo. Bahlukile iisuti zomsebenzi, isiqingatha segala kunye negala, nangona kungekho mahluko phakathi kwabo. Inye kuphela ehlala kuyo ubunewunewu bokuhombisa kunye nokuhombisa ababandakanyileyo. Njengoko usenokuba uqikelele, ezangaphambili zinobukrelekrele kunale yokugqibela, nangona zonke zintle kakhulu kwaye ziyabetha.
Ukuba undwendwela iGuadalajara, ikomkhulu kunye nesona sixeko sithandwayo kwiphondo laseJalisco, akuyi kuba nzima kuwe ukufumana isinxibo sakho esiqhelekileyo. Ngokusengqiqweni, abemi bayo abayisebenzisi yonke imihla, kodwa bayayisebenzisa Bathatha ithuba laso nasiphi na isiganeko ukugqoka. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kuthetha nawe malunga nesinxibo saseJalisco sabafazi.
IJalisco isinxibo esiqhelekileyo sabasetyhini
IJalisco isinxibo sabasetyhini esiqhelekileyo
Abafazi baseJalisco banxiba ilokhwe enye enesiketi eside. Yenziwe nge poplin, intamo yayo iphakame kwaye imikhono yayo iluhlobo lweengxowa. Kwakhona, kwinxalenye yayo ephezulu, ekuphakameni kwesifuba, iyathwala Iibhola ezimile okwe-vee ukugqagqana. Isiketi sikwabanzi kakhulu.
Ngokubhekisele kumbala, kuhlala kunjalo ithoni enye, nangona oku kuthelekiswa nokuchwayita iiteyiphu zemibala Oko kugqithisileyo kunye nentambo enxibe njengemihombiso. Ngokuphathelele izihlangu, yenziwe ngemitya yentambo kwaye inezixhobo ezahlukeneyo. Okokugqibela, isigqubuthelo sentloko senziwe ngeeribhoni ezifanayo nezo zibonakala kwilokhwe.
Isinxibo seJalisco emadodeni
Ngokumalunga nesuti ye-charro yamadoda, ikwindawo yayo ephezulu, yehempe apho ibhatyi emfutshane. Ifikelela kumazantsi esifuba kwaye imikhono yayo imfutshane ngokulinganayo ukubonisa izivatho zesilivere woonodoli. Ngokukwanjalo, inokuhonjiswa ngayo amaqhosha asixhenxe zetoni efanayo, nangona zinokuba zegolide.
Ngokubhekisele kwiibhulukhwe, ziqinile, suede okanye ilaphu kunye neethoni ezimnyama. Baphinde baphathe nqunqa yonke imilenze. Impahla iyancediswa ngeebhutsi zeleyisi ezinombala ofanayo nesuti.
Kufuneka kukhankanywe ngokukodwa umnqwazi. Yayenzelwe ukuba ixhathise ifuthe lelanga laseJalisco kunye nokukhusela ekuweni kwehashe. Ngesi sizathu, zenziwa ngeenwele zomvundla, uboya beva okanye ingca yengqolowa kwaye babenamatye amane okanye iiribhoni kwiglasi yabo eyaphindaphinda kwaye yenze ukuba inganyangeki.
Umphetho wale mnqwazi uqhelekileyo mkhulu kwaye ubanzi, ngokunjalo ebizwa ngasemva kwayo. Okokugqibela, ngamanye amaxesha ihonjiswe ngayo i-shawl okanye i-trim embroided. Lwaluluncedo kakhulu olu loyilo lomsebenzi wasentsimini kangangokuba lwaba yinto eqhelekileyo kulo lonke elaseMexico.
Okokugqibela, esinye isiqwenga esingalahlekiyo kwisitayile se-charro yi iserape. Kule meko, ayisosambatho, kodwa luhlobo lwengubo abakhweli bayithwala kunye nesali yehashe labo. Ke ngoko, awuyi kuyibona xa usiya kumngqungqo okanye kwimingcelele ngeenyawo, kodwa uya kuyibona xa kufikwa ekupasweni kwehashe okanye charro ibonisa ukuba siza kukubonisa ngokulandelayo.
Isetyenziswa nini ilokhwe eqhelekileyo kaJalisco
Ewe, xa sele sichazile ukuba zinjani iimpahla zeJalisco zamadoda nabafazi, siza kugxila ekuthetheni nawe malunga iminyhadala kunye nemibhiyozo apho kuqheleke ngakumbi ukufumana abantu benxibe zona.
Umboniso ogqwesileyo apho ezi mpahla zinxityiwe zezi charrería. Iziganeko zemveli zamahashe kwilizwe lama-Aztec zifumana eli gama. Zikhula kumabala emidlalo abiziweyo Iicharro canvases Kwaye zibandakanya ukuba abakhweli baqhuba imithambo eyahlukeneyo ngasemva kwamahashe abo.
Njengomdlalo, wazalwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX ukukhumbula imisebenzi yeenkomo ebaleni eyayiphelelwa lixesha. I-charrería ihlelwe eMexico ngumanyano kunye nezithethe zayo ziye zamkelwa njenge Ilifa leMveli loLuntu elingabonakaliyo yi-UNESCO ukuyigcina.
Okwangoku, abasetyhini nabo badlala indima ebalulekileyo kwi-charrería. Ayisiyiyo kuphela kuba unyaka nonyaka ukhethwe reina ophetheyo ukusungula imithendeleko eyahlukeneyo, kodwa kungenxa yokuba ithatha inxaxheba kukhuphiswano lwamahashe. BangamaAmazon abathatha inxaxheba, ngaphezulu kwako konke, kuqeqesho olwaziwayo charra ingxabano. Inamaqela ama-amazon asibhozo enza i-choreographies ngasemva kwamahashe abo kunye nesingqi somculo.
Kodwa, ngethamsanqa, ziyanda ii-charras ezikhuthazwayo ukuba zenze ezinye iintlobo zomboniso. Phakathi kwezona zibaluleke kakhulu, siya kukukhankanya Ihashe cove, inkunzi yenkomo kunye nabakhweli behashe, iindawo ezikwi-tovas, iimangan ngeenyawo okanye ihashe, uluhlu olufutshane kwindandatho okanye inyathelo lokufa.
Ngokusengqiqweni, kwezi meko abafazi banxiba ezinye iintlobo zezincedisi kwisuti yabo. Phakathi kwabo, iibhutsi ezinemihlubulo, umnqwazi kunye nabasebenzi. Ukongeza, babeka ehashe intaba ekhethekileyo ebizwa packsaddle.
I-Charros emele indlela yokufa
I-charrería imanyene nesiko laseMexico kangangokuba nge-14 kaSeptemba ilizwe laseAztec libhiyozela Usuku lweCharro. Kuwo wonke ummandla wayo (ukuba ufuna ukufunda inqaku malunga Veracruz, nqakraza apha) kubanjiswa imiboniso yamahashe nomculo ukuyikhumbula. Malunga neyokugqibela, le mariachi ngabona bantu baphambili.
Ngokubhekisele kwimeko yeJalisco, esithetha ngayo, ngalo mhla iGuadalajara ibhiyozela Intlanganiso yeHlabathi kaMariachi kunye neCharrería. Njengoko unokucinga, izitrato zekomkhulu zihonjisiwe kwaye amawaka amadoda nabafazi bahamba ngazo benxibe isinxibo saseJalisco kwaye betolika umculo wesintu.
Iziganeko ikakhulu zijolise kwi Inkululeko, apho kukho imithendeleko emininzi. Kodwa kukwakho imingcelele, imidlalo yegalala kwifayile ye- Iqonga lokusika umqala Kwaye nkqu nemasi ziculwa kwi I-Basilica yaseZapopán.
Amaqela abantu enza iintlobo zomculo ezinje nge Isiraphu yeTapatio, ekwabizwa ngokuba "ngumnqwazi waseMexico" ngokushiywa emhlabeni kunye nokudanisa ngeenxa zonke. Ngumdaniso wokuthandana ngaphambi komtshato ekufuneka siwujonge kwimvukelo yaseMexico.
Ngokudume kakhulu kolu hlobo lokubhiyozela zezi Culebra, umdaniso ophindaphinda umsebenzi emasimini, Iguana kunye ICaballito, phakathi kweminye imidaniso eyenziwa ngaba toliki ngelixa bemamele i Mariachis izandi. Eli ligama leengoma ezihamba nemidaniso kunye nemiboniso ye-charrería kwaye, ke, inxulunyaniswa ngokusondeleyo nesinxibo esiqhelekileyo seJalisco.
Ukuqukumbela, sikuxelele malunga Isinxibo esiqhelekileyo saseJalisco eyamadoda neyabafazi. Kodwa sikucacisele ngokubaluleka kwehlabathi le-charrería eMexico, elibandakanya le mpahla kunye nemisindo ye-mariachi. Konke oku kulungiselele inkcubeko eye yawela imida yelizwe laseAztec ukuba ithandwe kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Mekhsikho » Isinxibo esiqhelekileyo saseJalisco